Zimbabwe's First Lady flees from South-Africa - World - Pulse.ng
Grace Mugabe : Accused of assault in South Africa, Zimbabwe's First Lady flies home
Zimbabwe&apos;s first lady Grace Mugabe flew home from South Africa on Sunday, state media said, ending a week of confusion over her whereabouts after she allegedly assaulted a model.
Mugabe, who had been sought by police for allegedly attacking the 20-year-old model at a Johannesburg hotel, was granted diplomatic immunity in the case by South Africa&apos;s foreign minister on Saturday.
South African police had said they were on high alert to make sure Mugabe&apos;s 52-year-old wife did not leave the country with officials reportedly weighing up whether to issue an arrest warrant.
The first lady is alleged to have assaulted Gabriella Engels with an electrical extension cable on August 13 at the hotel where the model was staying with Mugabe&apos;s two sons who have a reputation for partying.
Zimbabwe&apos;s first lady Grace Mugabe has three children with President Robert Mugabe, who is 93
On Sunday, Zimbabwe&apos;s state media made its first mention of the alleged assault, hitting out at the "media frenzy" and saying there was "nothing meaningful being said".
But a spokesman for Zimbabwe&apos;s opposition Movement for Democratic Change (MDC) said Mugabe should not be granted immunity, describing her as "a thug and violent person who committed a heinous assault on an innocent young woman."
Grace Mugabe Zimbabwe's first lady claims diplomatic immunity in assault case